Xisbiga garabka bidix ee ka soo horjeeda mashruuca macdanta ayaa ku guuleystay codbixinta Greenland - Wardeeq 24 TV Xisbiga garabka bidix ee ka soo horjeeda mashruuca macdanta ayaa ku guuleystay codbixinta Greenland Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Xisbiga garabka bidix ee ka soo horjeeda mashruuca macdanta ayaa ku guuleystay...
Xisbiga garabka bidix ee ka soo horjeeda mashruuca macdanta ayaa ku guuleystay codbixinta Greenland
Xisbiga garabka bidix ee Greenland ee Inuit Ataqatigiit ayaa balan qaaday inuu ka soo horjeedo mashruuc weyn oo dhif ah oo laga qodayo dhulka Arbacada ka dib markii uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka markii labaad oo kaliya in ka badan afartan sano.
Guushiisa raaxada leh waxay shaki gelisay dhismaha macdanta ee Kvanefjeld ee koonfurta jasiiradda Arctic waxayna u dirtay calaamado adag shirkadaha macdanta caalamiga ah ee doonaya inay ka faa’iideystaan ​​kheyraadka macdanta ee Greenland ee aan wali la faafin.
Mashruuca weyn ee macdanta ayaa kaalintii dhexe ka galay codbixinta Greenland
Xaashida barafka ee Greenland ayaa sii yaraanaya diiwaanka sanadka 2019
Barafka dhalaalaya, badaha kacaya: Kusoo dhowaanshaha dhibcaha cimilada
Pompeo ayaa booqday Danmark ka dib markii ay ku murmeen Greenland
Inuit Ataqatigiit (IA) wuxuu ku guuleystay 37 boqolkiiba codadkii doorashadii degdega ahayd ee Talaadadii, marka la barbardhigo 26 boqolkiiba doorashadii ugu dambeysay, isagoo dhaafay xisbiga dimuqraadiga bulshada ee xukuma Siumut, oo helay 29 boqolkiiba codadka, sida ku cad natiijooyinka rasmiga ah.
Xisbiga Siumut ee u ololeeya macdanta ayaa xukunka hayey inta badan tan iyo markii Greenland ay xukun guri ka qaadatay Danmark 1979.
In kasta oo aan toos looga soo horjeedin macdanta, IA waxay leedahay diiradda deegaanka xoog leh. Waxay u ololeysay inay joojiso mashruuca Kvanefjeld, oo ay kujirto uranium, marka lagu daro dhulal dhif ah oo ay kujiraan neodymium – oo loo isticmaalo marawaxadaha dabaysha, gawaarida korontada iyo diyaaradaha dagaalka.
Hogaamiyaha IA Mute Egede oo 34 jir ah ayaa u sheegay idaacada DR markii wax laga waydiiyay arinta Kvanefjeld. “Ma dhici doonto.”
Mikaa Mered, oo bare ka ah arrimaha Arctic ee dugsiga ganacsiga HEC ee Paris, ayaa yiri natiijada: “Tani waxay shaki la’aan carqaladeyn doontaa horumarinta macdanta ee Greenland.”
In kasta oo inta badan Greenlanders ay u arkaan macdanta inay tahay waddo muhiim ah oo loo maro madaxbannaanida, haddana macdanta Kvanefjeld waxay ahayd meel lagu muransan yahay sannado badan, taas oo abuurtay kala qaybsanaan qoto dheer oo ka dhexjirta dawladda iyo dadweynaha ee la xiriirta arrimaha deegaanka.
“Maaha in Greenlanders aysan rabin macdanta, laakiin ma doonayaan macdanta wasakhaysan,” ayuu yiri Mered, isaga oo ula jeeday uranium iyo mashaariic dhif iyo naadir ah. “Greenlanders waxay dirayaan farriin adag oo iyaga iyaga ah inaysan mudnayn in loo huro deegaanka si loo gaaro madaxbannaanida iyo horumarka dhaqaalaha.”
Previous articleTurkiga ayaa xabsi daa’im ku xukumay 22 askari oo horey uga tirsanaan jiray isku daygii afgambi ee 2016
Next articleWaxaa Lago Soo Warramayaa Dagaalka u Dhaxeya Soomaalida iyo Canfarta Ee Dalka Itoobiya